Indlu yeLake entle eBellau Lake-Zonke iisizini ezi-4
Ngaphezulu kwe-100 ft yonxweme oluselwandle olunesanti kwaye luphakathi kwemithi yompayina, indlu yechibi ingumzekelo we-R&R. Indlu yechibi lusapho kunye nenja enobuhlobo kunye nomgangatho ovulekileyo womgangatho kunye namanqanaba amathathu eendawo zokuhlala (2100 sq ft). Indawo egqibeleleyo kwiintsapho ezinkulu ezijonge ukwabelana ngeholide ngaphandle kokubeka esichengeni ubumfihlo! Ngemisebenzi yonyaka yosapho lonke, yeyona ndawo ifanelekileyo yokudala iinkumbulo ezihlala zihleli! Iiyure ezi-2 ukusuka eBoston. IJacuzzi ifakwe ekupheleni kukaJanuwari kunye ne-gazebo entsha.
Kukho amagumbi okulala ama-4. Amagumbi okulala amabini abekwe kumgangatho woku-1 kunye neebhedi eziphindwe kabini. Amanye amagumbi amabini akumgangatho ophezulu 1 kunye nebhedi ye-trundle kunye nenye ibhedi engamawele kunye ne-matrasi yomoya yobukhulu bomoya ukuba iyafuneka ibekwe kwikhabhathi. Sigcina ipakethi ye-n 'play yeentsana / abantwana abancinci kwigunjana kwigumbi lokulala elikumgangatho wokuqala ukuya ngasekunene. Kukwakho nesofa ebekwe kwigumbi elisezantsi losapho, ifuton kunye nomatrasi yomoya yokumkanikazi ukuba iyafuneka ebekwe kwiishelufa phantsi kwezinyuko ezingaphantsi. Xa usebenzisa oomatrasi bomoya, nceda uqinisekise ukuba bathotyiwe kwaye babekwe kakuhle.
Idesika enkulu yangasemva ijonge iLake. I-grill grill ibekwe kwiveranda yangaphambili. Unxweme lunezitulo kunye nequla lomlilo (iinkuni zomlilo zingathengwa kwivenkile yelizwe lasekhaya nje imizuzu emi-3 kude).
Ngexesha leenyanga ezifudumeleyo, iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise ibhodi yethu yokubheqa, iikayak ezi-4 zabantu abadala, i-Kayak yabantwana aba-1 kunye nezikhephe ezi-2 zokubheqa ezihlala 5, esizishiya elunxwemeni. Abagcini bobomi babekwe kwindawo yokugcina engaphantsi kunye nezitulo zaselwandle. Kukho iithoyi zesanti kunye nee-noodle ezibekwe kwisitya sokugcina elunxwemeni. Ukuba uceba ukuzisa isikhephe, kuya kufuneka usazise ukuze sikushiyele isitshixo sesango lendawo yokuqalisa isikhephe. Sizama ukugcina iitanki ze-2 ze-propane kwi-grill egcweleyo / ejikeleziweyo, nangona kunjalo ukuba ingenanto, inokutshintshwa kwivenkile yelizwe lendawo 4 imizuzu yokuqhuba. Nika irisithi kwaye siya kukubuyisela.
Ngexesha leenyanga ezibandayo, fudumala kwindawo ekude yomlilo wegesi okanye kwi-jacuzzi (eza kufakwa ekupheleni kukaJanuwari 2022) emva kosuku lokutyibiliza, ukuloba umkhenkce okanye ukuhamba ngekhephu. Dlala umdlalo wePing pong, foosball okanye omnye wemidlalo emininzi yebhodi! *Iimoto kufuneka zipakwe zibambene xa silindele ikhephu ngexesha lokuhlala kwakho ukuze umntu wethu olimayo akwazi ukuphatha indlela yokuqhuba.
Sineelinen ezininzi kunye neetawuli. Ekupheleni kokuhlala kwakho, siyakucela ukuba iindwendwe zishiye iibhedi ezisetyenzisiweyo kwaye zishiye naziphi na iitawuli ezisetyenzisiweyo / iilinen ngumatshini wokuhlamba kwindawo engaphantsi-ngaloo ndlela siyazi into yokucoca xa sifika.
Sinikezela ngofikelelo kwi-intanethi engenazingcingo kwaye sinee-2 Smart TV's ezineNetflix, iAmazon Prime, iDisney+ kunye neDiscovery+; qiniseka ukuba ukhetha iprofayile "LAKEHOUSE" ngelixa usebenzisa nasiphi na isicelo. Kukho i-Amazon Echo phezulu kunye nomculo we-Amazon Unlimited (nceda ungayisusi). Sikwanayo nemidlalo yebhodi emininzi kunye neencwadi, kunye nokudibanisa okungaphezulu kobukhulu obu-4, itafile yeping pong kunye nebhola yeleli.
Enye into ekufuneka uyiqaphele, nangona sinesango losana lokugcina abantwana bekhuselekile kwigumbi lokulala, izitebhisi zinyuka kwaye abantwana abancinci kufuneka bakhatshwe ngumntu omdala.
Izinja zivumelekile ngokuvunywa kwangaphambili. Kufuneka yophulwe indlu, ibotshwe ngawo onke amaxesha ngaphandle kwaye ilandwe emva koko (nceda ungafaki iingxowa zenkunkuma zodwa kwinkunkuma okanye uzishiye kwipropati; kufuneka ilahlwe kwingxowa yenkunkuma eqhelekileyo phambi kokuba ilahlwe). Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga kwifenitshala. Kukho i-$35 yomrhumo wexesha elinye ngenja nganye esiya kuyicela kuwe ku-Airbnb.
Ijenereyitha yendlu yonke iyakhaba ukuba umbane uyacima ngexesha lesiphango seendudumo zamachibi!
I-COVID 19 UHLAZIYO: Nceda wazi ukuba senza konke okusemandleni ethu ukuthatha amanyathelo okhuseleko okucoca ngokupheleleyo iLake House ngeli xesha. Nceda uqhagamshelane nathi ngayo nayiphi na inkxalabo kwaye sifuna ukunqwenelela wonke umntu okuhle.
isofa ekwayibhedi eyi-1, 1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
70" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Le yindawo yosapho enobuhlobo. Icala elingasentshona leLake Belleau liphawulwa ziindlela ezimdaka ezinqabileyo, imithi emide, kunye nezindlu ezinomtsalane kunye neenkampu. Ungayipaka imoto yakho kwi-driveway kwaye uyishiye apho de uhambe! Indlu yechibi ikwindawo entle; Hamba uphume kwiveranda uye kulwandle lwakho lwabucala oluhle olunesanti enedokhi, imizuzu emi-4 yokuqhuba ukuya kwivenkile ekoneni, indawo yokumisa i-ayisikrimu, iposi, indawo yasekuseni kaCindy kunye neBlue Bay Seafood Restaurant. Ukutya eBlue Bay kuhle kwaye banendawo yokuphumla apho unokudlala khona iphuli, ubukele imidlalo okanye ucule ikaraoke. I-Pub yabantu abahluphekayo kunye ne-Knotty Pine yokutyela kunye nevenkile yegrosari yasekhaya kunye nemarike yamafama (ngeempelaveki zonyaka kuphela) kukuhamba okufutshane.
Ukuba igalufa ngumdlalo wakho, iProvincial Lake Golf Course ingaphantsi kwemizuzu esi-7 kwaye banendawo yokutyela enkulu nalapho.
Ichibi linokuloba okumangalisayo kwaye liyaziwa ngokuba ngumlomo walo omncinci kunye nomkhulu, ngoko ke yiza nentonga yakho yokuloba kunye nentlanzi ngqo kwi-kayaks yethu ngelixa uhlola ichibi okanye unyuke kunye nentlanzi ye-ice ebusika. Kukwakho neemayile kunye neekhilomitha zeendlela zolondolozo (kufutshane ne-ski mobile trail 19) yokuhamba, ukuhamba ngekhephu, ii-ATV's, ukukhwela ibhayisekile nokunye...
I-East Wakefield ikwindawo efanelekileyo phakathi kwePortland (iyure eyi-1), iPortsmouth (iyure eyi-1), iNorth Conway (imizuzu engama-45-banetoni yeendawo zokuthenga), imizuzu engama-30 ukuya kwidolophu yabakhenkethi iWolfboro, NH kunye neMeredith (imizuzu engama-30). Iitoni zokuthenga kunye neendawo zokutyela zithe saa!
Kukho i-skiing / i-tubing ekufutshane e-King Pine (imizuzu engama-30), kunye ne-Attitash, i-Wildcat kunye ne-Gunstock ingaphakathi kwemizuzu engama-50.
I-Storyland luhambo oluhle losuku ukuba unabantwana abancinci.
Eli khaya leholide yeyona ndawo ifanelekileyo yokutsiba kuyo yonke into enokunikelwa yiNew Hampshire neMaine.
Indlu yechibi yeyakho yonke ngexesha lokuhlala kwakho! Sifuna ukuba uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho kwaye awuyi kuba khona kwipropathi. Nangona kunjalo siyakuthumelela umyalezo omfutshane ukuba unayo nayiphi na imibuzo :) Zive ukhululekile ukuthumela umyalezo kwa-Airbnb okanye isisele sam esisinikwe efrijini xa ufika.
Indlu yechibi yeyakho yonke ngexesha lokuhlala kwakho! Sifuna ukuba uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho kwaye awuyi kuba khona kwipropathi. Nangona kunjalo siyakuthumelela umy…